Gaarsiinta Bouquet-wadnaha-aadanku (41 roodh) in Moscow - Order Ubax
Bouquet-heart of-aadanka (41 ubax)
Gaarsiinta ~ 3h., oo bilaash ah Moscow
Bouquet wadnaha oo ah 40 casaan iyo hal ubax cad.
Wareeg 40 cm
Dhererka 40 cm
47 dib u eegis ku saabsan shaqada ubaxa:
Olga Khasanova abaalmarinta URBAN 19-07-2021
Aad baad ugu mahadsantahay sida ugu dhaqsaha badan ee aad noogu soo gudbisay. Aad ayey ugu habboon tahay hay'adaha sharciga ah, koontada isla markiiba waa la sameeyaa. Waxaan kugula talinayaa dukaankan internetka.
Bouquet weyn iyo adeeg aad u dhakhso badan oo waxtar leh! Waxaan kula talin!
Aad baan ugu faraxsanahay ubaxyada u yimid aroosaddayda oo ku faraxsan dhalashadeeda, ubaxyada ayaa ur wanaagsan oo aad u qurux badan. Mahadsanid.
Adeeg fiican! Sida saxda ah sidaan dalbaday, aad u dhaqso badan. Mar labaad ayaan isticmaali doonaa! Mahadsanid !!
Wax walba waa hagaagsan yihiin, dhakhso leh oo tayo sare leh!
Adeeg heer sare ah, aad u xirfad iyo firfircoon. aad loogu taliyay
Waxay noqotay hadiyad cajiib ah. Ubaxyo qurux badan oo iskiis u naqshadeeya. Jilicsan iyo jacayl. Aad baad u mahadsantahay. Wax walba waxaa la keenay waqtigii loogu talagalay.
Aad qabow? Oo wax walba si dhaqso leh ayaan u keenay. Hadda kadib waxaan kaa dalban doonaa ...
Aad baad ugu mahadsantahay bouquet-ka aan caadiga ahayn, sida saxda ah sawirka !!! Waxaan aad uga walwalsanaa sida bouquetku u muuqan doono subaxdii (waxay dalbadeen in la keeno bisha Agoosto 31), Sebtember 1, laakiin si aan micno lahayn !!! Bouquetku wuxuu istaagay sifiican habeenkii oo dhan, subaxdii - dareenka ah inay kaliya ka baxeen dukaan ubax. Ma jiraan wax cabasho ah oo ku saabsan gaarsiinta sidoo kale. Waad ku mahadsan tahay qof kasta oo kaqeyb qaatay shirkii iyo gaarsiinta bouquet-ka !!!
Waxaan ka dalbaday ubax Belarus walaashay ku nool magaalada Moscow. Aad ayaanu ugu qanacnay, aad iyo aad u toosan. Markii ugu horreysay ee aan arko tusbax ayaa taagnaa muddo aad u dheer. Malaha wuxuu taagnaa saddex toddobaad. Aad u cusub oo aad u qurux badan. Qaado oo kama aad qoomameyn doontid.
Laan ka mid ah cymbidium casaan orchid ah oo ku jira sanduuqa hadiyadda.
3750 ₽ Orchid cymbidium "Mirabella"
shukulaatada "Kinder Surprise" 45, gypsophila 5, cagaarka, dambiisha
19750 ₽ Dambiil leh shukulaato iyo ubax
Bouquet of-aadanka cad (50 cm) 101 kumbiyuutar, dareemay, shalash, marooyin.
10550 ₽ Bouquet of-aadanka "Cad dhalaalaya"
Waxyaabaha lagu soo koobay hydrangeas midabbo badan leh (3 kumbiyuutar) sanduuq.
2700 ₽ Habaynta ubaxa "Jalaatada"
Bouquet of ubaxyada ubaxeedyada cad (oo leh ur) 11 kumbiyuutarro, eucalyptus oo ku jira sisinta.
10250 ₽ Bouquet of ubax "Udgoon"
cananaaska 1, tufaax cas 2, tufaax cagaaran 2, tufaax jaalle 2, liin 1, liin 3, tangerine 3, kiwi 2, muuska 5, pear 2, canab cagaaran 1, canab madow 1
5750 ₽ Dambiisha midhaha "Miro cusub"
Bouquet of 101 roses 50 cm Red Naomi kala duwan oo ku jira xirmo qurux badan.
10140 ₽ Bouquet of-aadanku cas (101 ubax)
Bouquet of ubaxyo, halabuur: Pink hydrangea - 1 pc. Cagaarka cagaaran - 3 kumbiyuutar. Shrub wuxuu u kacay casaan - 2 kumbuyuutar. Eucalyptus - 3 kumbiyuutar. Farshaxan - 1 pc. Filim - 1 pc. Ribbon - 1 pc.
3250 ₽ Bouquet of ubax "Verena Rose"
Bouquet of hydrangea midabbo badan (7 kumbiyuutar) oo ku jira warqad farshaxan sameeye ah.
4550 ₽ Bouquet of flowers Aisha